Yiyiphi UbuBuddha Abafundisa Ngokuthandana Nothando Lomtshato
Uthando Lwabantu Abathandanayo kunye Nomtshato kwiNkolelo yamaBuddhist
Unqulo oluninzi lunokuthetha ngokuthandana nomtshato. UbuKristu buze bubhekiselele " ngomtshato ongcwele," kunye nobuKatolika bujonga umtshato njengesigramente. Kuthetha ukuthini uBuddha malunga nothando nomtshato?
UbuBuddha kunye nothando lobuRoma
Akukho ngasemva kwimiBhalo yesiBuddhist kunye neenkcazo zokuthandana ngothando, kodwa masibe sisicacisa ukungaqondi kakuhle. Kusenokwenzeka ukuba uye wakuva ukuba amaBuddha kufuneka akhululeke.
Kwisithethi esingumthonyama saseNgilani, oku kubonisa ukuba uhlale unesihlunu.
Kodwa "isinamathiselo" sinentsingiselo ethile kwiBuddhism esondela ngakumbi kwinto ezininzi esizibiza ngokuthi "ukunamathela" okanye "ukuthatha." Kuxhomekeke kwinto ethile ngaphandle kwento yokufuna kunye nokuhaha. Ubuhlobo obusondeleyo kunye nobuhlobo obusondeleyo abuvunywanga kuphela kwiBuddhism; unokufumanisa ukuba inkqubo yobuBuddha yenza ubuhlobo bakho buphilile kwaye buvuyo.
Funda ngakumbi: Kutheni amaBuddha ayaKhusela isiNxulumaniso?
Indlela UbuBuddha Ilawula Ngayo Umtshato
UbuBuddha, ngenxa yeyona nto ininzi, ibheka umtshato ukuba uyintsebenziswano okanye yezenhlalakahle kwaye ayikho into yonqulo.
Uninzi lwabafundi bakaBuddha babezingqamana nabamonki. Abanye balaba bafundi babetshatile - njengokuba kwakunguBuddha ngokwakhe-ngaphambi kokuba bathathe izithembiso zesigodlo, kwaye ukungena kwi-sangas ye- monasti akuzange kuphele umtshato. Nangona kunjalo, i-monk e tshatywayo okanye i-nun yayisenqatshelwe nakuphi na uhlobo lokuxhaswa ngokwesondo.
Oku kwakungenxa yokuba isondo "sinesono," kodwa ngenxa yokuba umnqweno wesondo uyisithintelo ekuqinisekiseni ukukhanya.
Funda ngakumbi: Ukuzikhethela eBuddhism: Kutheni amaninzi amaninzi kunye namaMonks aseBuddha ahlala e-Celibate
UBuddha naye wayebeke abafundi, njengalowo ocebileyo u- Anathapindika . Kwaye abafundi babehlala betshatile.
Kwintshumayelo yokuqala eyayibizwa ngokuthi iSigalovada Sutta ebhalwe kwi- Pali Sutta-pitaka (Digha Nikaya 31), uBuddha wafundisa ukuba umfazi wayenetyala lokuhlonipha indoda yakhe, inceba kunye nokuthembeka. Ukongezelela, umfazi kwakufuneka anikwe igunya kwigumbi kwaye anikezelwe ngeengubo. Umfazi unyanzelekile ukuba enze umsebenzi wakhe kakuhle, asebenze ngobuchule kwaye akhuthele. Ufanele uthembeke kumyeni wakhe kwaye abe nomkhenkethi kubahlobo kunye nobudlelwane. Kwaye kufuneka "akhusele oko azisa khona," okubonisa ukuba uyayinyamekela nayiphi na indoda ayinika yona.
Ngamafutshane, uBuddha akazange avumele umtshato, kodwa akazange akhuthaze. I- Vinaya-pitaka ivimbela iidonki kunye namantonga ukuba babe ngabadlali bezemidlalo , umzekelo.
Xa izibhalo zobuBuddha zithetha ngomtshato, ngokuqhelekileyo zichaza imitshato yomtshato. Nangona kunjalo, ngokwembali yombhali uDamien Keown, kwi- Oxford Dictionary yaseBuddhism , "Amaxwebhu okuqala achaza amalungiselelo axeshana kunye anesigxina angena kuzo zombini izizathu zengqondo kunye nezoqoqosho, kwaye kwiindawo ezahlukeneyo zase-Buddhist Asia isithembu kunye ne-polyandry zinyamezelekile. "U
Ukunyamezela kuhambelana nombono weBuddhism ngokuziphatha ngokwesini kubafundi. Umthetho weBuddhist Third udla ngokuguqulelwa nje "Musa ukusebenzisa kakubi isondo," kunye nangaphezulu kweenkulungwane ezi ziguqulelwe ukuba zithetha ukulandela imimiselo yoluntu.
Ngaphantsi kweemeko izinto abantu abazenzayo ngesondo azibalulekanga kunokuba bangabangeli ukubandezeleka kwabanye okanye ukuphazamiseka kuluntu.
Funda ngakumbi: Ubulili kunye nobuBuddha .
Akukho nqatshelwe ngokuqhawula umtshato kwiBuddhism.
Uthando oluthile kunye nomtshato
Iimibhalo zeBuddha zangaphambili azichazi nto malunga nobulili. Njengoko kunye neminye imiba yesini, nokuba ubungqingili bobulili bobulili obuphambene nomthetho wesithathu luyinkalo yimiqathango yenkcubeko yenkcubeko neyenkcubeko kunemfundiso yenkolo. Kukho inkcazo kwi- Canon yaseTibet evimbela ubulili phakathi kwamadoda, kodwa akukho nto inqatshelwe kwii- Pali okanye zesiTshayons . Ubundlululo bobulili obufana neentlobano zesini kubonwa njengephula umthetho weThathu kwezinye iindawo ze-Asia yaseBuddhist, kodwa kwezinye iindawo, akunjalo.
EUnited States, isikolo sokuqala saseBuddha sinyuka kwaye saqala ukuqhuba imitshato yobulili obufanayo yayingamaBandla aseBuddhist aseMelika, emele uJodo Shinshu Buddhism .
ISizwi uKoshin Ogui weBandla laseBuddhist laseSan Francisco lenza umcimbi wokuqala womtshato waseBuddhist wesini-sexini ngo-1970, kwaye kwiminyaka eyalandela abanye abafundisi bakaJodo Shinshu ngokuthula kodwa ngaphandle kokuphikisana kwalandelwa. Le mitshato yayingekasemthethweni, kunjalo, kodwa yenziwa njengezenzo zenceba. (Jonga "'Bonke abantu bafanelwe ngu-Amida Buddha': uJodo Shinshu ubuBuddha kunye nomtshato wesini-sexu e-United States" nguJeff Wilson, i-Renison University College, epapashwe kwi- Journal of Global Buddhism Vol 13 (2012): 31- 59.)
Ama-sanghas amaninzi aseWest namhlanje anika inkxaso yomtshato wesini omnye, nangona ihlala ingumngqungquthela eBudetism yaseTibet. Njengoko kuchaziwe ngasentla iBuddhism yaseTibetan ine-commentary ephasayo eneminyaka engama-500 ubudala ebiza abantu ngesondo phakathi kwabantu ukuphula umthetho weThathu, kunye noBungcwele bakhe i-Dalai Lama ayinalo igunya lokusebenzisana lokutshintsha i-Canon yaseTibet. Ubungcwele Bakhe buxelele abaphandabuzayo ukuba akaboni nto ephosakeleyo ngomtshato wesini omnye ngaphandle kokuba umtshato onjalo uphula umthetho Ngoko ke akunjalo.
Funda ngakumbi: Ngaba i-Dalai Lama ivumela umtshato wamaGay?
O, kunye nenye into ...
Yintoni eyenzekayo kumtshato wamaBuddha?
Ayikho imicimbi yomtshato eBuddhist. Enyanisweni, kwezinye iindawo zaseAsia zeBuddhist abefundisi ababandakanyeki ekwenzeni imitshato nonke. Ngoko, kwenzeka ntoni emtshatweni wamaBuddha umcimbi wesiko kunye nesithethe sendawo.
Inkqubo yokulila ebuYuda
Iingcebiso ze-Jump Shot - Iikhowudi kunye neendlela
Izilwanyana ezingcwele zeSabhain Sabbat